Abakhiqizi Abakhiqiza Imishini be-Shot Blasting, Abahlinzeki - I-China Shot Blasting Machine Parts Factory
izingxenye ezisele zemishini yokudubula ukuqhuma
Ukuchazwa kwezesekeli zomshini wokudubula:
Ukuqondisa kokuqhuma kwensimbi yensimbi kulawulwa umkhono oqondile.Umsebenzi wesikhombana sokuqondisa ukulawula ukuqondisa kwe-projectile.
Ngokulungisa isikhundla sokuvula kwemikhono eqondayo ngokunengqondo, umphumela wokuqhuma kokudubula ungathuthukiswa kakhulu .Ukusebenza ngokubambisana nesondo lokudubula, isibhamu sensimbi singena endaweni ye-blade projectile ngokunengqondo, bese sibonisa ama-projectiles angena endaweni yokusebenza. .
Ukubekwa kwesikhombana esiqondayo somshini wokuqhuma kokudubula kubaluleke kakhulu. Uma ukulungiselelwa kungalungile, okhanyayo ngeke akwazi ukuqeda ukuhlanza kahle, okuholele ekwehleni kwekhwalithi yokuhlanza.
Esindayo kuzobangela ukugqokwa okusindayo kwezingxenye ezingagqokile, okuzoholela ekwehlelweni okukhulu empilweni yokuqoqwa komshini wokuqhuma kwezibhamu.
I-Shot blasting turbine ukwakheka okusemqoka komshini wokuqhuma kwezibhamu, ngokuya ngemodi yokuxhuma, kufaka phakathi uhlobo oluqhutshwa ngokuqondile nohlobo oluqhutshwa ngebhande; ngokuya ngesimo se-blade, kufaka phakathi nohlobo lwe-blade eqondile nohlobo lwe-blade lugobile.
Umshini wokuqhuma okuphezulu wokuqhuma umshini ogqoke izingxenye ezithile, ezinamabala, isilawuli sokuhambisa ikheji, ipuleti yokuvikela. ipuleti esehlangothini kanye ne-impeller.
ukudubula ukuqhuma kwezingxenye ze-Spare, Shot Blasting Wheel, wadubula Umshini Wokupholisa, Umshini wokuqhuma kwe-Shot, H umshini wokudubula uqhuma, Shot Blasting Turbine, Yonke Imikhiqizo